Lockheed L-1049 စူပါနက္ခတ်
မေးခွန်း Lockheed L-1049 စူပါနက္ခတ်
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #141 by PAYSON
ပြီးပြည့်စုံသောအင်ဂျင်ကိုပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ 5-6 မိနစ်ကျော်ကဒီလေယာဉ်ပျံ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ? တစ်ကြိမ်မဟုတ်ရုံတစျခုအင်ဂျင်, ဒါပေမယ့်အားလုံးတစ်ကြိမ်မှာ။ အစဉ်မပြတ်ငါ (ကြီးတွေချည်ငင်ရေဒါ disc ကိုနှင့်အတူ) recon type ကိုငါ့အဖေတပ်စွဲခဲ့ရေတပ်လေတပ်စခန်းထဲကကျနော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း, အထူးသဖြင့်တဲ့အခါလုံးဝရေတပ်မီးခိုးရောင်, ထိုသူတို့အဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးထဲမှာနေရာတစ်နေရာရှိခဲ့ပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #142 by Rolando
ငါငါ့ဥစ္စာ၏တူညီသောပြဿနာနှင့်လည်းမိတ်ဆွေများကရှိသည်။ တဦးတည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိပါသည်: ပုံမှန်ကြယ် (စူပါမဟုတ်) အမှားတွေမပါဘဲပျံသန်းနေကြသည် ...
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #144 by PAYSON
သင့်ရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အားလုံးကိုပါဝါလိုအပ်ပါတယ်; ကပဲမြေပေါ်သို့ကျရောက် .... ယူ-ချွတ်အောက်ပါအချို့ RPM အသုံးပြုမှုကျော်လွန်ဖို့မ (ထို "ကိုဖတ်-ငါ့ကိုအတွင်း), လည်ပတ်, ဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်ဘူး - ရန် - ငါကညွှန်ကြားချက်ထဲမှာဖွင့်ကိုသိ တက်နေဖို့။ ယခုငါလုပ်ပေးရန်ရှိသည်အားလုံးသင်ယောက်ျားတွေနှင့်အတူ Pix ဝေမျှဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆထားပါသည်။
တနည်းကား, သငျသညျ PAYSON ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #161 by Gh0stRider203
သင် cowl ခတ်ဖွင့်ခဲ့တာလဲ
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #162 by PAYSON
ရုံပွင့်လင်း cowl ခတ်ကြိုးစားခဲ့ .... သူမ 4K နှေးတက်နွေး-up, နောက်, ကျောအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုအလှည့်စေတော်မူ၏။ လေယာဉ်သို့ရှစ်, လေဟာနယ် gauge တဦးတည်းအားဖြင့်နိမ့်တဦးတည်းသွားကြဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ Soooo, 8 မိနစ်ပြီးနောက်သူမကကျောက်ကဲ့သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး, ထိုစံချိန်တင်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သော်လည်း, ငါကတန်ဖိုးထားတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #165 by Gh0stRider203
ငါအဘို့အကို "အနည်းငယ်" FB အုပ်စုများပေါ့ FSX။ ငါ ya များအတွက်န်းကျင်ကိုမေးပါလိမ့်မယ် တောင်မှ B-17 ပျံသန်းအတွက်တတ်ကျွမ်းနေသောအနည်းငယ်သူငယ်ချင်းများတယ်, ဒါကြောင့်ငါအရမ်းသူတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ Connie ငါပယ်ပေးဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှက်ကြွင်းသောအရာရတစ်ချိန်ကငါ VA သို့ဖွင့်ရေတပ်မှဖြည့်စွက်တာလာမယ့်ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါနှစ်ခု 767Fs ထိုသူနှစ်ယောက် 200LRs အရွက်သော 748-772ER, ချွတ်ဆပ်ဖို့ယခုအလုံအလောက်တယ်။ တစ်ဦးသင့်လျော်သော payload လေယာဉ်တက်ကြွလာသောအခါ 744LR တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲချိုမြိန်လစာအတွက်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ 748LCF နှင့် 772s တကယ်တော့လာမယ့်လျောက်ပတ်သောတဦးတည်းပြီးတော့နေဖြင့်သြဂုတ်လသည်အထိနှင့်သင်တန်း၏မဟုတ်ပါဘူးအရမ်းရယ်ရတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပိုက်ဆံချမှတ်သူများဖြစ်ကြသည်ရှိသမျှတို့ကိုငါရှိသင့် ငှက်အရမ်းရယ်ရတယ်ချွတ် paid
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #178 by PAYSON
wow ဝိညာဉ်တော် ... အစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဘို့အကောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားအသံ။ Aaaaah, B-17 ရဲ့။ ငါများသောအားဖြင့်ကိုယ့် get မျှအခွင့်အလမ်းကိုစီး။ သငျသညျအစဉျအမွဲ "ဒီလူမီနီယမ်အုံ့" အဖြစ်လူသိများတဦးတည်းစီးတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရဖို့ဆိုပါကလုပ်ပါ။ (သင်ပြီးသားရှိသည်မဟုတ်လျှင်) သူမသည်နှောင်းပိုင်းကစစ်ပွဲ built-in များနှင့်အင်္ဂလန်မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကံကြမ္မာကြောင့်ရှိသည်မယ်လို့သကဲ့သို့, စစ်သူမ၏ဆိုက်ရောက်အပေါ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့စစ်ပွဲအားထုတ်မှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့ပေ။ ဒါဟာအတွင်း, ထွက်လုံးဝခမ်းနားပါတယ်။ အားလုံးသစ်သားဖို့အတွက် walkway နှင့်အသုံးပြုသောဘယ်တော့မှနဲ့တူအမြီးသေနတ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း။ ကသွားရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့လိုင်းပေါ်တက်ကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးစီးနင်းရခဲ့လျှင်, (ငါ ပြု. လက်ျာဘက်လေယာဉ်မှူးနောက်ကွယ်မှချွတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ခုန်ထိုင်ခုံများတွင်ပြည်ရတယ်) လိုင်း၌ပထမဦးဆုံးနှင့်ကျိန်းသေသင်တို့၏ကောင်းသောကင်မရာယူဆောင်လာရှိစေသတည်း။
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #186 by tnig
အဆိုပါ connie များအတွက် README ဖိုင်ကနေ။ ဤအ Follow နှင့်သင်ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဒုက်ခထဲကသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင့်လျော်သော RPM များအတွက်ကျားကန်ထိန်းညှိရန်ရှိသည်ဘူး။
(5) အသေးစိတ် status ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်မခေါ်လုပ်ဖို့ check-အမှတ်အသား simicon right-click
မရှိမဖြစ်အင်ဂျင်နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ် readouts ဖေါ်ပြခြင်း။
အဆိုပါအင်ဂျင်မှာ operated ကြသောအခါ (7) Engine ကိုပျက်ကွက်ပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရှိသည်
အချိန်ကြာကြာကာလအဘို့ 2800 + RPM (အထူးသဖြင့်ဒီအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်
ယူ-ပယ်ပြီးနောက်) သို့မဟုတ် 2400 + RPM မှာ Spark ထိန်းချုပ်မှု = Advanced လျှင်။ မူတည်
ကျားကန်စေးမာစတာလီဗာသို့မဟုတ်အဖြစ် RPM ညှိဖို့အင်ဂျင်စေး simicon
(ဇယားကိုကြည့်ပါ) လက်ရှိလေယာဉ်ခရီးစဉ်အခွအေနေအဘို့လိုအပ်သည်။ ယင်းတွင်
status panel က, အင်ဂျင်မြင်းကောင်ရေ readout အောက်ပါအရောင်ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်:
အဖြူ - အိုကေအင်ဂျင်ပျက်ကွက်မရှိစိုးရိမ်ရေမှတ်;
အဝါရောင် - ရှည်လျားလွန်း left လျှင်လက်ရှိအာဏာကို setting ကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်
ဤဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် (ပင်ပြန် throttling သို့မဟုတ်ညှိပြီးနောက်
ကောင်တာ (မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါသည်) ကျောသုညရန်ဖြစ်ပါသည်
အနီရောင် - ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလိုအပ် - အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာနှင့်ကျားကန်စေးလျှော့ချပေးပါတယ်။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: tdhelpline
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #187 by PAYSON
tnig .... အဆိုပါအင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား, ဒါပေမယ့်တစျခုမေးခှနျးက - သင်သည်အစဉ်အတကယ်ကိုဤအမှုကိုပြုသနည်း ပြစ်မှု, ဒါပေမယ့်ငါကကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ဘယ်တော့မှ 1200 ပေအတိတ်တက်။ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်နွေး-Up ထဲကနေမရှိပါ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်မယ့်ငါ့ကိုရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါ (35 - ဒီဧရိယာကနေ 45 လေယာဉ်) နဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Lockheed, Boeing အကြီးဆုံးအချို့လည်းပါဝင်သည်, ဒါမှမဟုတ်ရုရှားပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ငါသည်ငါ့ပွဲစဉ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုသို့ငါ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရထင်ပါတယ်။ ငါ "အမှတ်တံဆိပ်က x" တဦးတည်းပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါ (RIP) ပျက်ကွက်လျှင်ငါသူမကတရား, ငါ၏ဇနီးပြောပြ, ကသွားလာရင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
တနည်းကား, ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ပတ်သတ်ပြီး, PAYSON
2 နှစ်ပေါင်း7months ago #188 by Gh0stRider203
အဘယ်သူသည်ဤအစူပါ Connie စေသည်? ငါအရမ်းရယ်ရတယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးကြည့်ရှိသည်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ
0.627 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်